Credit risk evaluati - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: credit risk evaluation based on art2 (英語 - ビルマ語)
ယင်းကို ဇယား4 တွင် ဖော်ပြထားသော ကုဒ်နံပါတ်သတ်မှတ်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
ထိုအရာသည် (reversed) အဘိဓာန်တစ်ခု၏စကားလုံးပေါ်တွင်ခြေခံသည်
Enrolment figures based on latest UNESCO Institute of Statistics data.
UNESCO စာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအား အခြေခံ၍ ကိန်းဂဏန်းများအား စာရင်းသွင်းပါ။
ဝူဟန်နှင့် ဟူဘေးတွင် အခြေချနေထိုင်ကြသူ အများအပြားက ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ရာ ဇာတိကိုအခြေခံ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ကြပါသည်။
အချို့သော နိုင်ငံများအနေဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပြင်းထန်သော နယ်မြေဒေသများမှ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ထိုဒေသများတွင် နေထိုင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Stocks plunged again based on coronavirus fears, the largest fall being on 16 March.
စတော့ဈေးကွက်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စိုးရိမ်မှုအပေါ် အခြေခံလျက် မတ်လ 16 ရက်နေ့တွင် အကြီးမားဆုံး ကျဆင်းမှုအနေဖြင့် နောက်တကြိမ် ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဒေတာ လုံခြုံရေးနှင့် အမည်မဖော်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အထောက်အထားပေါ် အခြေပြု၍ အကာအကွယ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားရမည်၊
အထူးသဖြင့် အက်ပ် အသုံးပြုသူများ၏ ပထဝီဝင် တည်နေရာကို ခြေရာခံသည့် စနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ကုသမှုအတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေပြုသည့် ရိုးရင်းသော အမှတ်ပေး အဆိုပြုချက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သော Zhou et al.က ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်အပေါ် ယခု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
For MERS, based onademographic study in June 2012, the mortality was 37% of 2,494 confirmed cases.
MERS အတွက်မူ 2012 ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော လူဦးရေဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အတည်ပြုထားသော ရောဂါဖြစ်ပွားသူ 2,494 ဦးအနက် သေဆုံးသူ 37% ရှိသည်။
Based on this, plasma was collected from the blood ofagroup of patients who recovered from COVID-19 and was injected into 10 seriously ill patients.
ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ COVID-19 ရောဂါခံစားရပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည့် လူနာများ၏ သွေးရည်ကြည်ကို ထုတ်ယူ၍ ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာနေသော လူနာ 10 ဦးအား ထိုးပေးခဲ့ပါသည်။
settentrione (イタリア語>ノルウェー語)it ' s not your stap ier (英語>ビルマ語)apa yang aku lewatkan (インドネシア語>英語)mai kar sakta tha (ヒンズー語>英語)marathi essay shalela sutti nasti tar (ヒンズー語>英語)harta (マレー語>簡体字中国語)como amaneciste bebe? (スペイン語>英語)pokok jagung (マレー語>英語)tagos regla (タガログ語>英語)saya tak heran (マレー語>英語)yene konjo, (アムハラ語>英語)saya mau tidur dulu iya (インドネシア語>英語)kaachra vegetable (英語>ヒンズー語)lotissement (フランス語>アラビア語)migrara (スペイン語>簡体字中国語)monster hunter (英語>ラテン語)付出努力 (簡体字中国語>マレー語)to keep fit (英語>ポルトガル語)te gusta la clase de espanol por que (スペイン語>英語)tidak mesra (マレー語>英語)essay on mera priya lekhak (英語>グジャラート語)naanu ninnannu pretistiruve (カンナダ語>英語)komodo dragon (英語>タミル語)reh gaya tha (ヒンズー語>英語)paglalala (タガログ語>英語)